ရွှေ Jungle ရွှေ Jungle
01သင် slot ကရွှေ Jungle ၏နာမတျောအားဖွငျ့စပ်စုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်? သငျသညျဖွစျဖို့တိုင်းအကြောင်းပြချက်များ. အဘယ်သူမျှမသိုက်လိုအပ် slot ကဂိမ်းသင်တို့အားဆောင်တတ်၏ဒီလောင်းကစားရုံအခမဲ့လှည့်ခြင်းများသင်သည်အစဉ်အစဉ်းစားနိုင်သောရွှေဘဏ္ဍာရှိသမျှကိုများပြားလှသောပုံစံများ.
အရက်ကြောင့်မှားယွင်း Adorning ရွှေမြို့တံခါးများမှာ, အထုံးအဖှဲ့, ရွှေပလ္လင်, artefacts, အဖိုးတန်ကျောက်, ဘာမှနှင့်ရွှေအရာခပ်သိမ်းနှင့်အတူ embedded ရွှေလက်စွပ်. ဒီလောင်းကစားရုံအခမဲ့လှည့်ခြင်းများမရှိသိုက်လိုအပ် slot ကအိန္ဒိယသမိုင်းဝင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည်. အိန္ဒိယသမိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှသဘောအရပေါများကြွယ်ဝ၏ဝါကြွားသောသူအိန္ဒိယရှငျဘုရငျတို့၏ကြီးမားသောချမ်းသာကြွယ်ဝအင်ပါယာအားဖြင့်လူသိများသည်.
IGT နိုင်ငံတကာဂိမ်းနည်းပညာများအတွက်ရပ်တည်, နောက်ပိုင်း slot ကဂိမ်း၏နာမ၌၎င်း၏အမည်ကိုဖို့အများကြီးအံ့သြဖွယ်ခရက်ဒစ်သူတစ်ဦးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ 2006. ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်အမြဲ High-end Animation နဲ့အနုပညာနည်းပညာ၏ပြည်နယ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး slot နှစ်ခုဖန်တီးခြင်းမှာရည်ရွယ်ထားသူအကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏တစ်ဦးကောင်းစွာ-ကျူးလွန်အသင်းများမှာ.
တောရိုင်းနှင့်ဖြန့်ကြဲညာဘက်ကိုသင့်အိတ်ကပ်အတွင်း၌ကြီးမားသောအနိုင်ပေးရောက်စေဖို့သူတို့ရဲ့တရားမျှတတဲ့ဝေစုအဓိပ်ပာယျရှိ. ဒီတော့သင်္ကေတ၏ sequence ကို / ပေါင်းစပ်သင် image ကိုမွငျလြှငျသငျ့တယျဘာတွေလုပ်နေလဲ?
ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာ, ရွှေ Jungle slot နှစ်ခုလောင်းကစားရုံအခမဲ့မရှိသိုက်လိုအပ်ဂိမ်းရှိပါတယ် spins 50 ကျော်ကဖန်တီး paylines5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း. အဆိုပါလောင်းကစား£ 1,500 မှ 50p တစ်လှည့်ဖျားမှစတင်သည်.
အရက်ကြောင့်မှားယွင်းရတနာကျောက်တို့ကို adorning သင်္ကေတများ, ဓားနှင့်တူ artefacts, headpieces, လှပသောရွှေမရနိုင်ပါဘူးသေတ္တာများ, ဆင်ရုပ်ပွားတော်, ရွှေတံခါးဝ. ထိပ်ဆုကြေးငွေသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2အားဖြင့်သင့်ရှယ်ယာများပြားဖို့စွမ်းရည်မြှင့်သည့်သင်္ကေတမှုန်ဝါးကျားပုံရိပ် 40 ရသောအခါကျား5အရက်ကြောင့်မှားယွင်းဖြတ်ပြီး.
အလောင်းကစားရုံရဲ့ features တွေကိုများထဲတွင်အခမဲ့မရှိသိုက်လိုအပ်ဂိမ်း spins, ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါတောရိုင်းနေထိုင်၏ဖော်ပြချက်မပါဘဲမပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်,4ပြဇာတ်အင်္ဂါရပ်. ဒီမှာ, သငျသညျကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်4သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာသော့ခတ်ရိုင်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းစေရုပ်တုရုပ်ထုရိုင်းသောသင်္ကေတများ. လာမည့်အတှကျသော့ခတ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းကျန်ရှိနေ4သင်တို့အဘို့အကြောက်မက်ဘွယ်စံချိန်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန် spins. ထိုအခါအဘယ်သူမျှမသိုက်လိုအပ်ဂိမ်းအများစု slot ကလောင်းကစားရုံအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကဲ့သို့ကြဲဖြန့်သင်္ကေတအားဖြင့်အစပျိုးသောအခမဲ့လှည့်ဖျားအပိုဆုအင်္ဂါရပ်ရှိလာ. အကြားရယူခြင်း 3-5 အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေသငျသညျအောကျပါရွေးချယ်စရာကနေရှေးခယျြစေသည်:
ကစားသမားတွေ '' ရွေးချယ်မှုများအားလုံးအကွာအဝေးများအတွက်သင့်လျော်သောအလယ်အလတ်ကှဲလှဲတဲ့အနိမ့်နှင့်အတူတစ်ဦးကတဆယ်တဆယ်အပေါ် slot ပါ, IGT တစ်ဖန်ပြန်လည်မျှသိုက်လိုအပ်ရွှေ Jungle slot နှစ်ခုလောင်းကစားရုံအခမဲ့လှည့်ခြင်းများနှင့်အတူတစ် hit သွင်းယူခဲ့သည်.